ရှက်ဖီး နဲ့ ပွဲမှာ ဆိုးရှား ဘာတွေ မှားပြီး ဘာတွေ မှန်ခဲ့သလဲ . . . - SPORTS MYANMAR
ရှက်ဖီး နဲ့ ပွဲမှာ ဆိုးရှား ဘာတွေ မှားပြီး ဘာတွေ မှန်ခဲ့သလဲ . . .
တနင်္ဂနွေ ညခြမ်း ကတော့ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ပရိသတ် တွေ ကို ခံစားချက် မျိုးစုံ ပေးစွမ်း ခဲ့ ပါတယ် ။ စုတ်ပြတ်သတ် နေတဲ့ ခြေစွမ်း နဲ့ ၂ ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့် နေချိန် ၊ ရုတ်ချည်း ဆိုသလို ၃ ဂိုး ပြန်သွင်းပြီး ဦးဆောင် နေချိန် ၊ နောက်ဆုံး မိနစ် မှာ ချေပဂိုး ပြန်ပေးလိုက် ရချိန် တွေ နဲ့ အတူ ပွဲပြီးချိန် မှာ တော့ သက်ပြင်း ကို အရှည်ကြီး မှုတ်ထုတ် မိကြ မှာ မလွဲ ပါပဲ ။ မနိုင် ခဲ့လို စိတ်တို ရမှာ ထက် ဂိုးပြတ် မရှုံးခဲ့လို့ စိတ်သက်သာရာ ရမယ့် သူတွေ က ပိုများခဲ့ မှာပါ ။
ယူနိုက်တက် ရဲ့ ခြေစွမ်း ကတော့ တကယ် ကို စိတ်ပျက် စရာ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ရှက်ဖီး ဟာ ဒီရာသီ မှာ ပုံစံ ကောင်း ရထားတဲ့ အသင်း ဖြစ်ပြီး လီဗာပူး ကိုတောင် ခက်ခဲ စေခဲ့ တာပါ ။ ဒါကြောင့် ယူနိုက်တက် အတွက် ခက်ခဲ တဲ့ ပွဲဖြစ် စေမယ်လို့ အားလုံး ကြိုတွေးထား ခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်း ယူနိုက်တက် ကို ခက်ခဲ စေခဲ့ တာက ယူနိုက်တက် ကစား သမားတွေ ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒီ အတွက် ဘယ်သူတွေ တာဝန် အရှိဆုံး ဖြစ်မလဲ . . . အသင်း တစ်သင်း ရဲ့ ရလဒ် အတွက် တာဝန် အရှိဆုံး ကတော့ နည်းပြ ပါပဲ ။ ယူနိုက်တက် ရဲ့ သရေ ကျမှု မှာလည်း နည်းပြ ဆိုးရှား က တာဝန် အရှိဆုံး ဖြစ်မှာ မလွဲ ဧကန်ပါ ။ ဒါကြောင့် တနင်္ဂနွေ ည ပွဲမှာ ဆိုးရှား တစ်ယောက် ဘာတွေ မှားခဲ့တယ် ၊ ဘာတွေ မှန်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ကို လေ့လာ သုံးသပ် ကြည့်ကြရအောင် . . .
လူထုတ်ပုံ က စပြီး ဆိုးရှား တို့ မှားခဲ့ပါတယ် ။ ရှက်ဖီး ကို ရင်ဆိုင် ဖို့ အတွက် ၃-၄-၃ ကို ရွေးခဲ့ပြီး ဒါက ဆိုးရှား ရဲ့ ပထမဆုံး အမှား ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ရှက်ဖီး ဟာ တိုက်စစ် ကောင်းတဲ့ အသင်း မဟုတ်ဘဲ ခံစစ် ကောင်းတဲ့ အသင်းပါ ။ ဒါကြောင့် ခံစစ် သမား ၅ ဦး ထည့်ပြီး ကစားဖို့ မလိုခဲ့ ပါဘူး ။ ဒါက တစ်ချက်ပါ ။
ခံစစ် သမား ၅ ဦး ထည့်ခဲ့ တာ ကို အပြစ် မဆိုချင်ရင်တောင် ဖီးလ် ဂျုံးစ် ကို ပွဲထုတ်ခဲ့ မှု အတွက်တော့ ဆိုးရှား ကို အပြစ်ဆို ရပါမယ် ။ ဂျုံးစ် ဟာ ဒီရာသီ မှာ တစ်ပွဲမှ မကစား ရသေး တာကြောင့် ပွဲချိန် အတွင်း မက်ဂွဲယား ၊ လင်ဒီလော့ဖ် တို့ နဲ့ နားလည်မှု အပိုင်းမှာ အားနည်းခဲ့ ပါတယ် ။ တကယ်လို့ တွမ်ဇီဘီ ကို သာ သုံးခဲ့မယ် ဆိုရင် ရှက်ဖီး ရဲ့ အဖွင့်ဂိုး က တစ်မျိုး တစ်မည် ပြောင်းလဲသွား နိုင် ပါတယ် ။
ဒါဆိုရင် ဆိုးရှား အနေနဲ့ ဂျုံးစ် ကို လုံးဝ မသုံးရတော့ ဘူးလား ၊ အဲ့ဒီလိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး ။ အသင်းက ဂိုးပြတ် နိုင်နေတဲ့ ပွဲမျိုးတွေ ၊ ဖိအား မရှိနိုင်သလောက် နည်းတဲ့ အခြေ အနေ တွေ မှာ ဂျုံးစ် ကို မက်ဂွဲယား ၊ လင်ဒီလော့ဖ် တို့ နဲ့ မိတ်ဆက် ပေးရမှာပါ ။ ဒီတစ်ချက် မှာတော့ ဆိုးရှား တစ်ယောက် တော်တော် နုံအ ခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင် ပါတယ် ။
ကွင်းလယ် အခင်းအကျင်းကို သွားကြရအောင် ။ တော်မီနေး မပါနိုင်တာ ကြောင့် ဖရက်ဒ် နဲ့ ပါရဲရား တို့ကို ဆိုးရှား ပွဲထုတ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါက မှားတယ်လို့ မဆိုနိုင် ဘဲ သာမာန် လုပ်ရိုး လုပ်စဉ် အရ လုပ်ခဲ့တာပါ ။ ဒီ အတွက် ဆိုးရှား ကို အပြစ်တင် လို့ မရပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ပါရဲရား ကို မြန်မြန် မလဲခဲ့တာ ကတော့ ဆိုးရှား ကို အမှတ်လျော့ချင် ပါတယ် ။
ဒုတိယ ပိုင်း မှာ ၄ – ၄ – ၂ ပြောင်း ကစား ခဲ့တဲ့ ဆိုးရှား ရဲ့ လုပ်ရပ် မှန်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ခံစစ် အမှား ကနေ ဒုတိယ ဂိုးထပ်ပေး လိုက်ရတာ ကြောင့် တိုက်စစ်တွေ ထည့်ပြီး အားကုန် ကစားခဲ့ ရာမှာ ဂိုးတွေ ပြန်ရခဲ့ ပါတယ် ။ ပွဲ အစ ကတည်းက ဖွင့်တိုက်မယ် ဆိုရင် ယူနိုက်တက် တို့ နိုင်ကောင်း နိုင်နိုင် ပေမယ့် ထိန်းကစား ဖို့ ကြိုးစား ရာကနေ ကိုယ့် အမှားတွေ က ကိုယ့်ကို ပြန် ဒဏ်ခတ်သွား ခဲ့တာ ပါပဲ ။
ဒီပွဲ ကနေ ယူနိုက်တက် တို့ သင်ခန်းစာတွေ အများကြီး ရခဲ့သင့် ပါတယ် ။ အထူး သဖြင့် ပါရဲရား ဟာ ယုံစားလို့ မရကြောင်း ၊ ဂျုံးစ် ဟာ အကျပ် အတည်းဖြစ် နေတဲ့ ကာလ မှာ အသုံးမပြုသင့် ကြောင်း ၊ ဇန်နဝါရီ မှာ လူသစ် တွေ ဖြည့်ရမယ့် အကြောင်းတွေ ကို ဆိုးရှား ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ခဲ့ သင့် ပါတယ် ။
ရှက်ဖီး ပွဲ ကို ချဉ်းကပ်ပုံ ၊ လူထုတ်ပုံ တွေ မှားခဲ့ ပေမယ့် လိုအပ် တဲ့ လူစားလဲမှု တွေ ကို လုပ်နိုင် ခဲ့တာ ကိုတော့ ပြန်ပြီး အသိအမှတ်ပြု ရပါမယ် ။ ဒါပေမယ့် နော်ဝေသားကြီး ဟာ ထိပ်တန်း အဆင့်မှာ ရှိနေ သူ တစ်ယောက် မဟုတ်သေးဘူး ဆိုတာ ကိုတော့ ထပ်ပြီး သက်သေ ပြခဲ့ တာပါပဲ ။
လာမယ့် ကြားရက် မှာ ယူနိုက်တက် တို့ ယူရိုပါလိဂ် ပွဲစဉ် ကို ယှဉ်ပြိုင် ကစား ရမှာပါ ။ ပွဲစဉ် ( ၄ ) ပြီး ကတည်းက နောက်တစ်ဆင့် တက်သွားပြီ ဖြစ်လို့ ဖိအား မရှိတော့ ပါဘူး ။ လာမယ့် အပတ် မှာတော့ ဗီလာ နဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ ကစား ရမှာပါ ။ ဒီပွဲမှာ ရော ဆိုးရှား ဘာတွေ မှန်ပြီး ဘာတွေ မှားဦးမလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့် ရဦးမှာ ပါပဲ . . .